Waa bisha Luulyo waana waqtiga ugu kulul ee sanadka, iyo gudaha dhex dhexaadka iyo dhammeysiga aqoon-isweydaarsiga Ingiriisiga Printing iyo Dyeing Co., Ltd ee Keqiao Binhai New Area ee Shaoxing, heerkulku ma ahan mid aad u sareeya sida la filan karo. ” Xaaladda ayaa ka sii culus midda 1aad, mashiinka furan, aad u yar ma aha heer kulka aad u sareeya ee aqoon isweydaarsiga ”iyo agaasimaha waaxda soosaarka iyo soosaarka Ingiriiska, ayaa u sheegay weriyaasha in geeska suuqa maxalliga ahi waqtigiisu dhammaaday xilligan. , suuqyada dibedda iyo sababta dillaaca oo aan jirin wax horumar ah oo la sameeyay, sidaa darteed dhadhanka guriga dhammaantiisu waa mid aad u hooseeya, wuxuu sidoo kale maqlay guryo midab leh oo shaqada ka eryaya xitaa hal ama laba bilood, cadaadiska warshadaha. Si loo dayactiro warshadda loona ilaaliyo shaqaalaha inay shaqeeyaan oo quudiyaan, maamulahayagu wuxuu go'aansaday inuu hoos u dhigo qayb ka mid ah khidmadda si loo soo jiito macaamiisha qaar. Kormeeraha dhinaca ayaa yiri.
Waxaa la bartay in sanadkaan, uu saameeyo cudurka faafa, saameynta ay ku yeelaneyso guud ahaan warshadaha dharka sameynta ayaa ah mid aad u weyn, dhamaan xiriirada waxaa ugu wacan amarro la'aan iyo ganacsi gaabis ah. Daabacaadda iyo soosaarka warshadaha ayaa isku mid ah, furitaanka waqti-gaaban, bakhaar maalinle ah oo laga soo bilaabo milyan oo mitir ilaa laba ama saddex boqol oo kun mitir. Xaaladda noocan oo kale ah amarro la'aanta muddada-dheer, qaar ka mid ah warshadaynta wershadaha ayaga oo jaraya khidmadaha rinjiga, si loo joogteeyo hawlgallada aasaasiga ah ee tartanka “awood-sarreynta”, si loo ilaaliyo macaamiisha inay ku noolaadaan, oo ay noolaadaan muddo dheer, waa Waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkaddan midabaynta sanadkaan. ” Awoodayaga wax soo saar ee Keqiao Daabacaadda iyo cabbirista aagga agglomeration waa caalami. Shirkadaha daabacaadda iyo soosaarka ayaa halkan ku leh in ka badan kala bar wadarta guud ee dhoofinta dhoofinta. Laakiin qeybtii hore ee sanadkan, guud ahaan suuqyada Yurub iyo Mareykanka, suuqa Bariga Dhexe, iyo inta badan suuqyada qaaradda Afrika ayaa asal ahaan la xiray, in ka badan nus ka mid ah amarada waa la waayey, cadaadiska waa la qiyaasi karaa, sidaa darteed dheehida lacagta ayaa hoos u dhacday sidoo kale ifafaale lama huraan ah. ” Wang Wenjun, maamulaha guud ee Shaoxing English Printing and Dyeing Co., LTD, ayaa qiyaasey oo u sheegay wariyeyaasha: “Lacagta midabaynta asalka ah ee 2 yuan / mitir waxay noqon kartaa oo keliya 1.3-1.4 yuan / mitir hadda, sanadkaan khidmadda kaarka dheehidda marka la barbar dhigo isla kan muddada sanadkii hore qiyaastii 30%. ”
Sida ku xusan warbixintii ugu dambeysay ee xog ururinta Shiinaha ee Warshadaha daabacaadda iyo Soosaarka, laga bilaabo Janaayo ilaa Meey 2020, wax soo saarka iyo soo saarista shirkadaha ka sareeya qiyaasta ayaa gaarey 17.612 bilyan mitir, hoos u dhac sanadle ah oo ah 14.46%. Xaaladda dhoofinta ee alaabta wax lagu daabaco iyo midabaynta ayaa wali ah mid laga xumaado, laakiin ka hortagga faafa iyo xakamaynta faafa ee Shiinuhu wuu wanaagsan yahay. Iyada oo si joogto ah loo sii daayay awoodda isticmaalka qoyska, suuqyada baahida qoyska ayaa si muuqata u soo kabanaya, oo hoos u dhaca wax soo saarkii Jannaayo ilaa Maajo ayaa hoos u dhacay boqolkiiba 1.40 boqolkiiba marka loo eego bishii hore.
Hangzhou Hangmin Damei Dyeing & Finishing Co., LTD., Oo ku yaal Xiaoshan, Hangzhou, wuxuu lahaa 80-90% amarrada ganacsiga shisheeye iyo qaddar yar oo ka mid ah amarrada iibka gudaha ka hor faafa. Bilowga faafidda cudurka faafa ee Yurub iyo Mareykanka bishii Maarso, Shirkadda waxay hagaajisay istiraatiijiyadeedii waqtigeeda waxayna isticmaashay marxaladda 'marxaladda adag' ee amarada ganacsiga shisheeye si ay u riixdo kooxda ganacsiga oo dhan inay beddelaan. diiradda saar macaamiisha gudaha. ”Wuhan, oo ah xudunta Shiinaha, waxay fureysay mowjad suuqa gudaha ah ilaa iyo markii la xirayay Abriil 8. Waxaan sameynay istiraatiijiyad waqtigeedii ku habboon si aan ula wareegno mawjaddan. “Sida uu sheegayo Hangzhou hangmin Damei midabaynta iyo dhammaynta Co., LTD. Agaasimaha guud ee shirkada Lu Zhongliang ayaa shaaca ka qaaday in shirkada ay furtay jawi daganaansho sanadkan, kan ugu sarreeya uu gaari karo 8-9. Marka laga reebo in aysan jirin awood bishii Febraayo, waxqabadka bishii Marso wuxuu aasaas ahaan la mid ahaa sidii sanadkii hore. Wadarta 92 milyan mitir oo maro ah ayaa la sameeyay, kaliya labo ama seddex milyan mitir ka yar sanadkii la soo dhaafay. Ka dib bilihii Abriil-Juunyo oo dhan, awoodda waxsoosaarka ayaa sidoo kale gaartay 60% -70% muddadii ugu sareysay ee sanadkii la soo dhaafay. Lu Zhongliang wuxuu yiri si loo ballaariyo suuqa gudaha, Hangmin Delta wuxuu kaloo sameeyay hoos u dhigid ujrada khidmadaha, iyadoo qiimaha gaarka ah uu hoos ugu dhacay 5% -10%. Ujrada asalka ah ee rinjiyeynta oo ah 3 yuan / mitir waxay noqon doontaa 0.15 yuan. Dhinac, khidmadaha haraga ayaa loo wareejin doonaa macaamiisha, dhinaca kale, waxaa lagu kala duwanaan doonaa sicirka amarada ganacsiga gudaha iyo dibedda.
Marka laga hadlayo xaalada qalafsan ee caalamiga ah ee hada taagan iyo suuqa suuqyada kulul, shirkadaha ganacsiga ee Hangzhou iyo Shaoxing waxay qaateen qaar ka mid ah siyaasadaha ujrada ah ee midabaynta si ay ugu guuleystaan ​​macaamiisha badan, ama ay u sii xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya macaamiisha isla markaana ay uga badbaadaan xilliyada ka baxsan. Marka la saadaaliyo saadaalinta daabacaadda iyo suuqaynta dheecaanka suuqa qeybtiisa labaad ee sanadka, Wang Wenjun wuxuu aaminsan yahay in coVID-19 ay u horseedi doonto burbur aan la qiyaasi karin dhamaan nidaamka dhaqaalaha. Haddii cudurka faafa ee caalamiga ah si buuxda loo xakameyn karo badhkii labaad ee sanadka, weli waxaa jira muddo dheer oo dayactir ah in la tago. Fikradiisa, waxaa jira arrimo badan oo aan la hubin oo suuqa ka jira, markaa nooca noocee ah ee suuqa dharka ka soo kabsanaya, ayaan wali la aqoon. Lu Zhongliang wuxuu soo jeediyay in daabacaadda iyo rinjiyeyaasha shirkadaha qeybtii labaad ee sanadka ay wali u baahan yihiin inay talaabo talaabo talaabo ah qaadaan, isbeddelada waqtiga shaqada ee isbeddelada leh, si firfircoon u ballaariyaan suuqa, la qabsadaan suuqa ganacsiga gudaha, loo hubiyo xasilloonida awoodda wax soo saar shirkadeed marka hore, ka dibna raadiso horumar dheeraad ah.
Waqtiga boostada: Jul-28-2020